ngathi - Blch womoya Isayensi & Technology Co., Ltd.
IBLCH Pneumatic Science and Technology Co Ltd yasungulwa ngo-Agasti 2004, itholakala endaweni yezimboni yokuthuthukiswa komnotho i-YUEQING. Le nkampani ihlanganisa indawo engama-24000㎡, enezisekelo zokukhiqiza ezi-5 ezinokungaphezulu kwe- Abasebenzi abangama-300. Kuyinto ibhizinisi okungelona lesifunda eligxile ku-R & D, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nokugcinwa kwensiza yezingxenye zomoya.
Manje sihlinzeka ngemikhiqizo emihlanu yochungechunge lwe-pneumatic, efana nokwelashwa komthombo womoya, ukufakwa kwomoya, amasilinda, ama-valve we-solenoid, amashubhu we-PU nezibhamu zomoya, amamodeli acishe abe yi-100 nezinto eziyizinkulungwane emhlabeni jikelele .sidlulile i-ISO 9001: isitifiketi sango-2015, i-ISO 14001: Isitifiketi sango-2015 sokuphathwa kwemvelo kanye ne-CE markig ye-EU. Futhi siyiNational High-tech Enterprise, inhlangano ekhulayo yamaZinga kaZwelonke.
Sihlala sithatha "ikhwalithi ephezulu" njengento ebaluleke kakhulu, izingxenye eziyisihluthulelo zonke zenziwa ngokucubungula okuzenzakalelayo, okuqinisekisa ngempumelelo ikhwalithi ezinzile yezinto. sithatha isikhathi eside ekuhlolweni kwempilo ende futhi siphikelela ekutheni wonke umkhiqizo owodwa kufanele uhlolwe futhi uvivinywe ngaphambi kokulethwa. Okwamanje, "Ngemuva Kwesevisi" ukuzibophezela kwethu, ngoba siyazi ukuthi amaklayenti azosiqonda ngokuphelele isimo sethu sengqondo sokuzibophezela futhi adale isimo sokuwina.
I-FRL Assembly Workshop
Umhlangano Wokuzenzekelayo Womhlangano
Isikhungo Sokusebenzela Izinsimbi
I-Robotic Arms Workshop
Womoya nokufaka Testing
Imikhiqizo Yomoya Warehosue